နိုင်ငံများကလိုအပ်သော Covid စစ်ဆေးမှုများ - နိုင်ငံအားလုံးနှင့်လိုအပ်ချက်များ ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | အကြံပေးချက်များ, ယေဘုယျ
သိ Covid စမ်းသပ်ခြင်း တစ်နှစ်ပျံ့နှံ့ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်ကလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအထူးသဖြင့်သင်ရန်ရှိသည်လျှင်သူတို့နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နေဖို့စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည် မကြာခဏသွားလာရ စီးပွားရေးအတွက်သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးများသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းကမတူဘူး ကာကွယ်ဆေးများသည်နှေးကွေးသည်, အဘယ်သူမျှမဘုံပုံစံထူထောင်နိုင်ပါတယ် ခရီးသွားလာရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များအပေါ်။ ဒါဟာအတွင်းအလေ့အကျင့်သို့ဤထားရန်မဖြစ်နိုင်ပါခဲ့ပါဘူး အီးယူပြည်နယ်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေများသို့သွားရောက်ရန်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါတွေအားလုံးအတွက်သင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ Covid စစ်ဆေးမှုကိုနိုင်ငံအတွက်သင်စစ်ဆေးသွားမှာပါ။
1 နိုင်ငံမှလိုအပ်သော Covid စစ်ဆေးမှုများ - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအနေဖြင့်ထောက်ခံချက်ရရန်
1.1 ဥရောပသမဂ္ဂအတွက် Covid စမ်းသပ်ခြင်း
1.1.5 နိုင်ငံများကလိုအပ် Covid စမ်းသပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အတင်းကျပ်ဆုံးအကြားနယ်သာလန်
1.2 Covid စစ်ဆေးမှုများကိုဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပရှိနိုင်ငံများကလိုအပ်သည်
1.2.3 ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်နိုင်ငံများမှလိုအပ်သော Covid စစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်
နိုင်ငံမှလိုအပ်သော Covid စစ်ဆေးမှုများ - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအနေဖြင့်ထောက်ခံချက်ရရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်နှင့်စတင်ပါလိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံများသည်အများဆုံးလည်ပတ်မှုတွင်ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများ၊ အထူးသဖြင့်ခရီးသွား the ည့်သည်အများဆုံးနိုင်ငံများရှိအခြေအနေကိုဆန်းစစ်လေ့လာပါမည်။
ဥရောပသမဂ္ဂအတွက် Covid စမ်းသပ်ခြင်း
ဥရောပသမဂ္ဂပြည်နယ်များရှိသည် မျှမျှတတတင်းကြပ်လိုအပ်ချက်များကို visitors ည့်သည်များလက်ခံရရှိသည့်အခါ။ သူတို့၏နယ်မြေများတွင်ကူးစက်ရောဂါပြင်းထန်စွာတိုးချဲ့ခြင်းကဤနည်းအားအကြံပေးသည်။ အမှန်မှာ၊ သက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ (သို့) PCR စစ်ဆေးမှုများအပြင်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများတောင်းခံလေ့ရှိသည်။ မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်အလားတူပင်၊ Covid နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုကြည့်ရအောင်။
စဉ်းစားပါ Espana မြင့်မားသောအန္တရာယ်areaရိယာ။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏တိုင်းတာမှုများဖြစ်ကြသည် အတင်းကျပ်ဆုံး၏။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံမှခရီးထွက်လျှင်၊ သင်မရောက်ရှိမီ ၄၈ နာရီအလိုတွင်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော PCR တင်ပြရန်လိုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်၌စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည် ဒီဂျစ်တယ်မှတ်တမ်း နှင့်တစ်ချိန်ကတိုင်းပြည်အတွင်း, တစ် ဦး ကိုကယ်တင် 10 နေ့က quarantine သင်အနှုတ်လက္ခဏာ Covid စမ်းသပ်တင်ပြလျှင်5လျှော့ချနေကြသည်။
ယခုအချိန်တွင်စပိန်နိုင်ငံမှပျံသန်းခွင့်မပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှပြုလုပ်ပါကသင်၏ရောက်ရှိမှုမတိုင်မီ ၇၂ နာရီအထိဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသော PCR ကိုတင်ပြရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာသင်လုပ်ရမည် အီလက်ထရောနစ်ကျမ်းကျိန်လွှာ သငျသညျရောဂါခံစားနေရပြီးနှင့်ဖြည့်စွက်ဘူးသော ခရီးသည်တည်နေရာ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကတစ် ဦး တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်7နေ့က quarantine.
အပူ cycler သို့မဟုတ် PCR စက်
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတို့၏တိုင်းပြည်ထဲသို့ ၀ င်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်သင်သည်အမြင့်ဆုံးအသက် ၇၂ နာရီရှိသည့်အနုတ်လက္ခဏာပြသော PCR ကိုတင်ဆက်ပြီးဖုံးအုပ်နိုင်သည် ကြှမျးကိနျြဆိုထှကျခကျြ မင်းမှာ Covid မရှိဘူး ထိုနည်းတူစွာသင်လမ်းခရီးတွင်သို့မဟုတ်ရောက်ရှိချိန်တွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုတင်ပြပါကသင်ကိုယ်တိုင်ချုပ်တည်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ရောဂါကိုပထမဆုံးခံစားခဲ့ရပြီးစပိန်လူမျိုးများကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်နိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အကယ်၍ မင်းကအံ့ wond ဖွယ်ရာအံ့ဖွယ်ရာများသို့လည်ပတ်လိုပါက ရိုးမား o Florenciaခရီးသွားခြင်းမပြုမီ ၄၈ နာရီအတွင်းလုပ်သောအပျက်သဘောဆောင်သော PCR ကိုလည်းတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီးခရီးမစတင်မှီကျမ်းကျိန်လွှာကိုသင်ဖြည့်ရမည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါကသင်ကိုယ်တိုင်အထီးကျန်နေရမည်။
နိုင်ငံများကလိုအပ် Covid စမ်းသပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အတင်းကျပ်ဆုံးအကြားနယ်သာလန်
စပိန်နိုင်ငံကနေခရီးသွားခွင့်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဒီဟာကလိုအပ်ချက်အရအခိုင်အမာဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသင့်ကို ၇၂ နာရီအထိ PCR စစ်ဆေးမှုကိုတောင်းဖို့လိုတယ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစိစစ်ပုံစံ ထွက်လမ်းနှင့်နောက်ကျောနှင့်လမ်းပေါ်မှာနှစ် ဦး စလုံး အခြားလိုအပ်ချက်များ.
သို့သော်၊ ဤအရာများအားလုံး၌သင်၌ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုရှိပါကသူတို့သည်သင့်အားတိုင်းပြည်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ရောက်ရှိချိန်တွင်အစပျိုးလျှင်၊ သင်သိမ်းဆည်းရမည် 10 နေ့က quarantine.
သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနောက်ပိုင်းအိမ်နီးချင်းသို့လည်းသွားနိုင်သည်။ သင်အပျက်သဘောဆောင်သော PCR ကိုတင်ပြပြီးတိုင်းပြည်သို့မ ၀ င်ခင် ၇၂ နာရီအတွင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
သင်တစ် ဦး ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရှိသည် ခရီးသည်တည်နေရာကဒ် အကယ်၍ စပိန်နိုင်ငံသည်လူ ၁၀၀,၀၀၀ လျှင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၅၀၀ ကျော်၏အဆင့်တွင်ရှိလျှင် (လက်ရှိအခြေအနေမဟုတ်ပါ) 14 နေ့က quarantine။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သွားလျှင် Madeira o အာ့ဇိုရီစ်, သူတို့ကသင်တို့ကိုလည်းတစ် ဦး ဖြည့်ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ် ကပ်ရောဂါမေးခွန်းလွှာ.
လူတစ် ဦး သည် Covid ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပေးသည်
ဘုံဥရောပအာကာသနှင့်မကိုက်ညီသောနိုင်ငံများတွင်တောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ အချို့သောနိုင်ငံများတွင်သက်သေပြရန်မလိုအပ်သော်လည်း၊ ဘယ်တစ်ခုကလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုလိုအပ်သလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပသမဂ္ဂမှထွက်ခွာသွားပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်လည်ပတ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ဖြည့်စွက်ရမည် ခရီးသည်တည်နေရာပုံစံ သင့်ရဲ့ဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့။ ထို့အပြင်၊ သင်ဖြစ်ပွားနေသည့်ကပ်ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သင်လုပ်ရန်လိုကောင်းလိုပေမည် 10 နေ့က quarantine.
ဒီတိုင်းပြည်မှာလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်။ သို့သော် စပိန်နိုင်ငံမှခရီးသွားများဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ သင်သည်အခြားတစ်နေရာမှရောက်ရှိလျှင်၊ သင်တိုင်းပြည်ကို ၀ င်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ရောက်ရှိမှုမတိုင်မီ ၇၂ နာရီ (သို့) ၎င်းနှင့်နီးကပ်သောရက်စွဲတစ်ခုတွင်အပျက်သဘောဆောင်သော PCR ကိုတင်ပြရန်လိုလိမ့်မည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်နိုင်ငံများမှလိုအပ်သော Covid စစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်ဥရောပတိုက်နှင့်မသက်ဆိုင်သော်လည်း၎င်းသည် Schengen ofရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည်၎င်း၏ပြင်ပနယ်နိမိတ်များကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော်လက်ရှိတွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်ခရီးသွား Switzerland ည့်သည်များ၏လက်ခံမှုအရအလွန်တင်းကျပ်သည်။
သင်၎င်းကိုသွားနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်မရောက်ရှိမီ ၇၂ နာရီအလိုတွင်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော PCR ကိုတင်ပြရမည်။ အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့သင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ် 10 နေ့က quarantine အခြား PCR တစ်ခုရခဲ့လျှင်၎င်းကို ၇ သို့လျှော့ချနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်တစ် ဦး ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည် ဆက်သွယ် tracing ကဒ်.
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နိုင်ငံသည်ယခုအခါ visitors ည့်သည်များအား ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်တင်းကျပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားလိုလျှင် PCR နှင့်aကိုတင်ပြရန်လိုအပ်လိမ့်မည် IGM (immunoglobulin detection) အပျက်သဘောဆောင်သောသည်သင်၏မလာမီ ၄၈ နာရီအလိုတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တည်ရှိသည့်ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် whitelist ထဲတွင် တိုင်းပြည်သံရုံးကပေးအပ်သည်။
ဒီတစ်ခုပဲသူပေးလိမ့်မယ် tarjeta တရုတ်ကိုရောက်ရင်မင်းလုပ်ရလိမ့်မယ် PCR ကိုပြန်လုပ်ပါ နှင့်ဖြည့်ပါ ကျန်းမာရေးပုံစံ။ ပထမတစ်ခုကအပြုသဘောဆောင်လျှင်၊ 14 နေ့က quarantine.
မြောက်အမေရိကနိုင်ငံသည်နယ်နမိတ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသူများကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်ထားသည် စပိန်သို့မရောက်မီ ၁၄ ရက် ကြိုတင်၍။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှခရီးသွားလျှင်၊ သတင်းအချက်အလက်ပုံစံ နှင့်လည်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေ မထွက်ခွာမီ ဖြည့်စွက်ကာ, ပြည်နယ်တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်.
တောင်ဘက်မှအိမ်နီးချင်း စပိန်ကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဆိုင်းငံ့လိုက်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှရောက်လာလျှင်၊ ခရီးမတိုင်မီ ၇၂ နာရီအလိုတွင်အပျက်သဘောဆောင်သော PCR ကိုသင်တင်ပြရမည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အာရဗီဘာသာဖြင့်ရေးသားရမည်။ နောက်ဆုံးသင်ရောက်လာသောအခါသူတို့သည်သင့်ကိုတောင်းလိမ့်မည် ခရီးသည်ကျန်းမာရေးကဒ်.
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ antipodes ထဲတွင်ရှိသော်လည်းသင်သြစတြေးလျသို့သွားရန်သို့မဟုတ်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ အဲဒီလိုဆိုရင်မင်းတို့ကိုငါတို့ပြောမယ် ဒါကြောင့်စပိန်ကနေအခွင့်အာဏာမပေးပါ။ သင်သည်အခြားတပါးသောလူမျိုးမှထွက်သွားလျှင်၊ ခရီးသွားကြေညာချက် ပြီးတော့မင်းကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနိုင်တယ် 14 နေ့က quarantine.
ဤရောဂါပျံ့နှံ့မှုအပြင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းဘရာဇီးသည်သင့်အားစပိန်နိုင်ငံမှထွက်ခွာခွင့်ပြုသည်။ သို့သျောလညျး, သငျသညျခရီးစဉ်မတိုင်မီ 72 နာရီအထိအပျက်သဘောဆောင်သော PCR တင်ပြနှင့်တစ်ဖြည့်စွက်ရပေမည် ကျန်းမာရေးပုံစံ.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံများမှလိုအပ်သော Covid စစ်ဆေးမှုများအကြောင်းပြောဆိုပါကမက္ကဆီကိုသည်အနည်းဆုံးတောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာခရီးသွားဖို့, သင်ဖုန်းခေါ်သာဖုံးလွှမ်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် စွန့်စားမှုအချက်ဖော်ထုတ်ခြင်းမေးခွန်းလွှာ သင့်ရဲ့ဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့ခရီးသွား၌တည်၏။
သမိုင်းကြောင်းအရစပိန်နိုင်ငံနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံသည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံမှလာလျှင်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လိုအပ်ချက်များအတွက်အတော်လေးတောင်းဆိုမှုများရှိနေသည်။ ခရီးမသွားခင် ၇၂ နာရီအလိုတွင်သင်လုပ်ဆောင်သော PCR တစ်ခုကိုသင်တင်ပြရမည်။
သင်၏ရောက်ရှိချိန်တွင်သင်ကဖြည့်ရမည် ကျန်းမာရေးကြေငြာချက် သူတို့သည်သင့်ကိုပြုပြင်ကြလိမ့်မည် အခြား PCR။ ထို့အပြင်သင်၌ငွေပေးချေရန်တာဝန်ရှိသည် စိတ်ပူစရာပါ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ နှင့်နောက်ဆုံး PCR ကိုးကားထားသောအပြုသဘောဖြစ်ပါကသူတို့သည်သင့်အားလိုက်နာစေလိမ့်မည် သီးသန့်ထားခြင်း, ခွဲထားခြင်း.
ဤတိုင်းပြည်သည်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုလည်းဆိုးရွားသည်။ တကယ်တော့ယခုအချိန်တွင်စပိန်နိုင်ငံမှခရီးသွားလာခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှပြုလုပ်ပါက၊ သင်သည် ၇၂ နာရီအထိရှိသောအနုတ်လက္ခဏာပြသော PCR ကိုတင်ပြပြီးလက်မှတ်ထိုးရမည် ကျန်းမာရေးကျမ်းကျိန်လွှာ။ နောက်ဆုံးသင်ထည့်ဝင်ရမည် သင့်တွင်အာမခံရှိသည် သင်ရောဂါဖွံ့ဖြိုးလာပါက Covid ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
နယူးဇီလန်ရှိ Covid-19 ထောက်လှမ်းရေးစင်တာ
၎င်းသည်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်တရုတ်ပြည်ပြီးလျှင်တရုတ်နိုင်ငံပြီးလျှင်ပထမဆုံးသောနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အခြားနိုင်ငံများမှခရီးသွားများကိုလက်ခံသည့်အခါအလွန်တင်းကြပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စပိန်နိုင်ငံကလူတွေ၊ သူတို့နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံး ၁၄ ရက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝင်ခွင့်ကိုသူတို့ခွင့်မပြုဘူး.
စပိန်နိုင်ငံမှလေကြောင်းခရီးစဉ်များကိုအနည်းဆုံးအထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည် 30 ဧပြီလ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှခရီးသွားလျှင်၊ အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်မကောင်းသော PCR ကိုတင်ဆက်ပြီးသင်မရောက်မီ ၇၂ နာရီအလိုတွင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဒါ့အပြင်သင်စုဆောင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနိုင်သည် 14 နေ့က quarantine.
ဒါ့အပြင်အင်ဒီးတိုင်းပြည်ရှိပါတယ် စပိန်နိုင်ငံမှလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအားတားမြစ်သည်အနည်းဆုံးmidပြီလလယ်အထိဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားတစ်နေရာမှရောက်ရှိလျှင်၊ ခရီးမတိုင်မီ ၇၂ နာရီအလိုတွင်မကောင်းသော PCR ကိုတင်ပြရပါလိမ့်မည်။ သင် upload လုပ်ရန်လည်းလိုလိမ့်မည် အပျက်သဘောဆောင်သောအစီရင်ခံစာ နှင့်တစ် ဦး ဖုံးလွှမ်း ကျန်းမာရေးကျမ်းကျိန်လွှာ သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီ ၇၂ နာရီအတွင်း ဒီ link ကို.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်ထားပါသည် နိုင်ငံများကလိုအပ် Covid စမ်းသပ်မှု။ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း၊ သင်ခရီးကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကာကွယ်ဆေးအလွန်များများမခံမချင်းဤတိုးတက်မှုမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ခရီးသွားနိုင်တယ်၊ သေးငယ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » နိုင်ငံများကလိုအပ် Covid စမ်းသပ်မှု